Israa'eel karoora godaantota Afriikaa hari'uu haquushee labsite - BBC News Afaan Oromoo
Israa'eel karoora godaantota Afriikaa hari'uu haquushee labsite
25 Elba 2018
Goodayyaa suuraa Egereen godaantota Afriikaa qoccolloodhaan jiraachuu taate
Israa'eel godaantota Afriikaa kumaatamaan lakkaa'aman biyyasheetii baasuuf karoora xumuraa baastee turte haqxeetti
Mootummaan Israa'eel xalayaa Mana Murtii Walii Galaaf barreesseen kanaan booda godaantota seeraan alaa hari'anii baasuun dhimmma mariisaanii akka hin taane beeksiseera.
Aanga'oonni dhimma godaansaa Israa'eel akkaataa karaa nagaa fi fedhii godaantotaa irratti hundaa'uun karoora qabame milkeessuun danda'amurratti mala dhawaa jiru, jedha xalayaan barreeffame.
Egereen godaantota Afriikaa kuma 30tti hiiqanii ammas taanaan qoccolloo fi dubbiidhaan kan guutame ta'eera.
Manni Murtii Walii Galaa Israa'eel kanaan dura gaaffii godaantota hari'anii baasuu kuffisee ture.
Wayita sana godaantota Eeritiiriyaa fi Sudaan irratti kan xiyyeeffatame wayita ta'u ,hanga isaan maallaqa isaan jiraachisuu fi tikeetii xiyyaaraa argatanitti hari'uun sirrii akka hin taane mirkaneessee ture manni murtii kun.
Achiin, Ministirri Muummee biyyattii Beenjaamiin Netaanayaahuu dhimma kana warri dhihaas akka fala itti barbaadaniif jecha sagantaa Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii baasee ture sana kuffisaniiru.
Goodayyaa suuraa Ministirri Muummee Israa'ee Beenjaamiin Netaanayaahuu keesaa fi alaa dhimma godaansaarratti qeeqamaniiru
Akka walii galtee Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Israa'eel godaantotaaf dahannoo kennuuf dirqama qabdi.
Wiixata darbe Miseensonni Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataa US 18 kan warra dimokiraatotaa ta'an Israa'eel godaantota raasaa keessatti baastee gataa jiraachuusheetti aarii akka qaban xalayaa Ministira Muummee Netaanayaahuudhaaf barreessaniin ibsanii turan.
Godaantonni kunneen hedduun isaanii kanneen Eeritiiriyaa fi Sudaan irraa baqataniidha. Isaan kun roorroo jibbuuf biyyaa kan ba'an yoo ta'an ,Israa'eel garuu godaantota Afriikaa mara rakkoo diinagdeef akka baqatanitti fudhatti.
Goodayyaa suuraa Godaantota Afriikaa Kibba Israa'elitti wayita to'atamanii jiran
Tibba darbe Israa'eel godaantotaaf waan ittiin jiraatanii fi gatii geejjiba qilleensarraa kenniteefii nagaadhaan haa geggeessitu jechuun murteen darbee ture biyyattii keessatti baayyee qeeqamee ture.
Ministirri muummee Beenjaamiin Netaanayaahuu morrmiin irratti ka'u kan hundee hin qabne ta'uu dubbatanii, godaantota seera qabeessa ta'an ammoo akka qubsiisan himaniiru.